Pasitera Mailhol: Hiady toerana amin'ny taona 2018
Efa azon'ireo momba azy antoka ny fahalanian'ny pasitera Mailhol izay kandida harotsaka sy tohanan'ny antoko GFFM (Gideona Fandresena ny Fahantrana eto Madagasikara) ho filoham-pirenena amin'ny taona 2018. Ny antoko GFFM, izay nahorin'ity mpitondra fivavahana apokalipsy ity no manolotra azy ho kandida amin'ny fifidianana ho avy io.
Ho tanteraka amin'izay ny faminaniana raha ny nambarany ka izy no hitondra ny firenena Malagasy.
Nihaona tamin'ireo mpikambana mpomba azy aty Mahajanga ao amin'ity antoko politika izay izy no filoham-boninahiny, pasitera Mailhol omaly alahady 08 oktobra 2018 nitafa mivantana sy nihaino ny hetahetan'izy ireo.
Nohamafisiny nandritra izany fa ho azony amin’izay ny seza fa fahadisoana kajy no nahatonga azy tsy mbola tafapetraka tamin'ny taona 2013 araka ny faminaniany.
Nambarany fa 5 taona amin'ity taona 2017 ity izao ny antoko GFFM ary efa manenika ny faritra 22. Efa misy ny rafitra isaky ny Kaominina manerana an'i Madagasikara.
Fandresena ny fahantrana araka ny anarany ny foto-kevitra hijoroan'ny antoko ary miantso ireo rehetra mitovy hevitra aminy na olon-tsotra na fikambanana na firaisamonim-pirenena sy antoko politika hiara hanatratra ny tanjona amin'izy ireo.
mardi, 12 décembre 2017 20:28
mardi, 12 décembre 2017 14:37
mardi, 12 décembre 2017 05:33
auto insurance teenagers
car insurance benefits car insurance law
[url=http://autocarins2018.com/car-insurance-rental-car/]senior car insurance[/url]
lundi, 11 décembre 2017 06:32
dimanche, 10 décembre 2017 14:51
samedi, 09 décembre 2017 17:53
samedi, 09 décembre 2017 06:26
vendredi, 08 décembre 2017 17:46
vendredi, 08 décembre 2017 14:01